Sidee loo bilaabaa helitaanka URL-yada dib-u-eegista ee tayada goobtaada?
Dadka akhriya maqaalkani waxay u badan tahay inay sameeyaan sida ugu wanaagsan ee kor loogu qaado dadaalkooda SEO iyo kor u qaadida muuqaalka astaanta SERP. Waxaad shaqo badan ka qabatay boggaaga si aad uga qayb qaadato dadaalka aad ufixinayso raadinta goobta, laakiin weli wax natiijo ah ma jiraan. Sidaa darteed, waa wakhti inaad hubiso waxa kale oo aad ku samayn karto goobtaada. Weligaa ma ka fikirtay URL-yada lakulanka iyo sida ay u saameyn karaan darajooyinka boggaaga? Abuurista URL-yada saaxiibtinimo ee SEO waa mid ka mid ah ficil ku-ool ah lagama maarmaanka ah oo aan la tirtiri karin haddii aad rabto inaad hesho taraafikada la bartilmaameed u yahay goobtaada. Maqaalkani wuxuu kaa caawinayaa inaad barato qaar ka mid ah tabaha SEO-yada ah si loo abuuro URLs dib-u-qaabeyn ah oo aad u fiican.
Siyaabaha lagu wanaajin karo URL-yada backlink
Xusuusnow nadaamka aadanaha
goobta waa in aad u baahan tahay inaad wax walba u sameyso si aad u hesho faa'iideystaha boggaga internetka. Makiinadaha raadinta ayaa aad ugu mahadceliya oo abaal-mariya boggaga internetka kuwaas oo siiya adeegyo leh khibrad raadin oo quman. Maalmahan, waa qeyb muhiim ah. Taasi waa sababta aadan uga welwelin oo kaliya xayndaabyada Google ee kala saaraya bogagga shabakadda, laakiin sidoo kale ku saabsan dadka isticmaala tarjumada URL-yada sida ay si weyn u saameeyn laheyd heerkaaga raadinta raadinta.
Tusaale ahaan, haddii aad URLs aad u aragto mid aad u dheer oo dhib badan, macaamiishaada suurtagal ah kuma dhicin inaad gujiso xidhiidhkaaga. Natiijo ahaan, waxay yarayn doontaa tirada dadka ku imaanaya goobtaada iyo in ay hoos u dhigaan dadaalka aad ufadhiga raadinta.
Marka, marka aad abuureyso URLs backlink ee goobtaaga, waxaad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso waxyaabahan aadanaha soo socda:
xukunka, kuwa isticmaala kuwaas oo raadinaya natiijooyinka raadinta, isku day inaad ka gooysid domain sida. net ama. anaga oo tixgelineyno nuucyada noocan oo kale ah sida tayada, kuwa aan la ixtiraami karin iyo spamka. Isticmaalayaasha ayaa ah mid aad u adag in la gujiyo bogagga leh qiimo iyo kalsooni. Tusaale ahaan,. domains com ayaa loo tixgeliyaa in ay noqdaan kuwo leh sumcad iyo kalsooni. Taasi waa sababta aad u baahan tahay si aad u hesho tan marka aad dooranayso domain ku habboon goobtaada.
Haddii macaamiishayadaadu ayan si sax ah u fahmi karin boggaga internetka, ka dibna waxaad haysataa fursado yar oo aad ku heli kartid taraafikada goobtaada oo aad u bedesho iibinta. Qof kasta ayaa tagi doona website aan akhrin karin. Isticmaal shuruudaha raadinta
Shuruudaha raadinta ee kudub dhexaad u ah ololeytkaaga raadinta mashiinka raadinta iyo abuuritaanka shabakadaada internetka ee interneetka (online)
. Waa fikrad aad u feker badan inaad ku darto URL-yadaada sababtoo ah waa fursad aad u fiican inaad ku sheegto ganacsigaaga internetka. Adigoo ku dhejinaya mugdi badan oo lagu magacaabo raadinta shabakadaada, waxaad u ogolaaneysaa dhageystayaashaada la beegsanayo inay si sax ah u ogaadaan waxa ay la kulmi doonaan ka dib goobtaada. Marka ay shabakadaha internetka siiyaan jawaabta habboon ee su'aalaha user, Google wuxuu eegaa ereyada muhiimka ah ee URL-yada. URL oo la fududeeyay wuxuu bixiyaa fikrad la xiriirta kumbuyuutarrada raadinta haddii ay u baahan yihiin si ay u kala soocaan boggaaga ama maahan sida adoo adeegsanaya cinwaanka ay ka heli karaan horudhaca content content. Xaqiiji inaadan isticmaalin erayo muhiim ah oo ku jira URL-gaaga maadaama aysan taasi saameyn ku yeelan doonin erey raadin muddo dheer ah Source .